မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါး
မမှားသင့်တာ မမှားရအောင် ဂျာနယ်ပါ ဆောင်းပါး
Posted by ဆန်နီနေမင်း on Sep 23, 2011 in Copy/Paste | 8 comments
၄။ သာဒိယနံ – သာယာခြင်း။ ဒီအင်္ဂါ (၄)ရပ်လုံးပြည့်စုံရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါတယ်။ ဒီလေးပါးထဲက အင်္ဂါတစ်ပါးပါး ချို့ယွင်းရင်တော့ ကံမထိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပါးပါးကျုးလွန်မိရင် အကုသိုလ်အပြစ်လေးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြထားတဲ့ အင်္ဂါလေးချက်မှာ နံပါတ်တစ်အရ
ယောက်ျားလေးများပြည့်တန်ဆာမနှင့် ဆက်ဆံတဲ့အခါ ကိုယ့်ထက်အရင် ငွေပေးထားသူ ရှိပါက နောက်ယောက်ျား ကံထိုက်ပါတယ်။ ပြည့်တန်းဆာမလည်း ငွေလက်ခံထားသူနဲ့ မပြီးပြတ်ခင် အခြားယောက်ျားကို လက်ခံမယ်ပါက ကံထိုက်ပါတယ်။ ကာမပိုင်ရှိတဲ့သူဟာ လူဇာတ်မဟုတ်တဲ့ တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ကျူးလွန်ရာရင်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရဖြစ်ပါတယ်။ ဘူရိဒတ်နဂါးမင်းကြီးဟာ သီလဆောက်တည်ကြောင်း၊ ယုန်, ဖျံ, မြေခွေး, မျောက်တို့သည်လည်း သီလဆောက်တည်ကြောင်းကို ကျမ်းဂန်တို့၌ လာရှိတဲ့အတွက် တိရစ္ဆာန်များမှာလည်း ငါးပါးရှစ်ပါးစတဲ့ သီလများရှိကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် တိရိစ္ဆာန်နဲ့ကျုးလွန်ရင်လည်း ကံထိုက်ပါတယ်။ ကောသလဘုရင်ရဲ့ မိဖုရားကြီးဖြစ်တဲ့ မလ္လိကာဟာ ခွေထီးနဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ခဲ့ရတာပါ။ အရူးမကို မိဘစသည်တို့ကလည်းကောင်း၊ တစ်ယောက် ယောက်ကလည်းကောင်း အုပ်ထိန်းသူရှိရင် ကျုးလွန်သူမှာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပါတယ်။
၄။ဆေးဝါးမှီဝဲ ရှိမြဲအင်္ဂါထက် လွန်ပြီးကျင့်တဲ့အခါ မိမိမယားပင်ဖြစ်သော်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပါတယ်တဲ့။
ဒီလေးပါးထဲက အင်္ဂါတစ်ပါးပါး ချို့ယွင်းရင်တော့ ကံမထိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပါးပါးကျုးလွန်မိရင် အကုသိုလ်အပြစ်လေးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။
Sorry to all , too inquisitive..
if it is “oral sex” ?????? how ???
Dear Htoo San & villagers,
these oral sex, anal sex, sadomasochism, lesbian, gay & etc are forbidden.
Because, those are under “မသွားလာအပ်တဲ့ အရာဌာနဖြစ်ခြင်း” &
“ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ်မဟုတ်တဲ့ နည်းများ” categories.
” If you get any type of sexual pleasure other than your legally married wife,
then, you committed sin “ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ” ”
( ၇။ အမျိုးအနွယ် ( Myanmar Nationality ) တို့ အုပ်ထိန်းသောသူ )
( ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ အကျယ်ဖွင့်ဆိုချက် အမေးအဖြေ – ဆန်နီနေမင်း )
In addition, even having affair with your legally married wife,
၃။ ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ်မဟုတ်တဲ့ နည်းများဖြင့်ကျင့်တဲ့အခါ
( oral sex, anal sex, sadomasochism & etc )
၄။ ဆေးဝါးမှီဝဲ ရှိမြဲအင်္ဂါထက် လွန်ပြီးကျင့်တဲ့အခါ
( utilize Viagra, Cialis, Spanish Fly & etc )
မိမိမယားပင်ဖြစ်သော်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပါတယ်တဲ့။
Finally, my personal opinion is,
It seems, those divine rules are not appropriate to real world/circumstance.
If our “Buddhism” still follow/go by this path/way,
then, I fear, our “Buddhism” cannot survive very long.
I amastrong follower of “Buddha” & I love “Buddhism”.
So, the worst nightmare of mine is,
“topple of Buddhism & extinct of Buddhist” happen within my life span.
I also want to know/learn ” the real talk of Buddha ” only.
( notatranslation, အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာဆရာ ဖွင့်ဆိုချက်များ )
( အဋ္ဌကထာ ဖွင့်ဆိုချက်များအပေါ် ယူနိုင်သည်ကိုယူ မယူနိုင်သည်ကို မယူယုံ ရှိပါသည် )
ငါးပါးသီလကို.. အဋ္ဌကထာ၊ ဋီကာဆရာပြန်ဖွင့်ချက်တွေမပါ..
မူရင်းပါဠိတော်ကအတိုင်း… တိုက်ရိုက်မြန်မာလို ပြန်ရေးထားတာများရှိရင် ဖတ်ချင်မိပါတယ်ဘုရား..။
I’ve no idea. so sorry about that.
တင့်ပါ့ဘုရား မှတ်သားသွားပါတယ် ဘုရား…
Thanks for your answer Foreign Resident.
As per Sanninaymin post above , “ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ရန် ဒီအချက်လေးချက် ပြည့်စုံရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်၊”
“ယနေ့ခေတ်လူငယ်များ ကာမကိစ္စကျုးလွန်တဲ့အခါ မိမိကျုးလွန်တဲ့လူဟာ ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်မထိုက်ကို သေချာသိရှိနားလည်ဖို့အတွက် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ကြောင်း အင်္ဂါလေးပါးကို ရေးသားတင်ပြပေးပါမယ်။
၄။ သာဒိယနံ – သာယာခြင်း။ ဒီအင်္ဂါ (၄)ရပ်လုံးပြည့်စုံရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါတယ်။ ဒီလေးပါးထဲက အင်္ဂါတစ်ပါးပါး ချို့ယွင်းရင်တော့ ကံမထိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ပါးပါးကျုးလွန်မိရင် အကုသိုလ်အပြစ်လေးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
Again did mention following :-
“စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်းတွင် `မိစ္ဆာဖြစ်ဖွယ်၊ အိမ်ရှင်ဝယ်၊ လေးသွယ်ရှိ၏ အဘယ်နည်း´ဆိုတဲ့ ကြည့်ကန်ရှင်ကြီးရဲ့အမေးကို ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေတော်မူခဲ့ပါတယ်။
၄။ဆေးဝါးမှီဝဲ ရှိမြဲအင်္ဂါထက် လွန်ပြီးကျင့်တဲ့အခါ မိမိမယားပင်ဖြစ်သော်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပါတယ်တဲ့။”
ွှအဲ့ ဒီလိုဆိုထားတော့. ကျီးသဲလေးထပ် ဆရာတော် မိန့်တော်မူတာ တစ်ချက်ညိစွန်းယုံနဲ့ ဘုန်းဘုန်းဆန်နီမင်း ပြောတဲ့ အချက်လေးချက် မပြည့်စုံသော်လည်း ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ ထိုက်ပြီလား ။
After all , I totally agree with you on “those divine rules are not appropriate to real world/circumstance.”.
အင်း… ဒါတွေဟာ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါပဲ။ တချို့က သိရဲ့နဲ့ လွန်ကျူးနေကြတာလား။ မသိလို့လားဆိုတာတွေလည်း စဉ်းစားစရာတွေပါပဲ။ အမှန်တော့ လူတိုင်း
၄။ သာဒိယနံ – သာယာခြင်း။ ဒီအင်္ဂါ (၄)ရပ်လုံးပြည့်စုံရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါတယ်။
လေ့လာမှတ်သားပြီး လက်ဆင့်ကမ်း ပြောကြားစေချင်ပါတယ်။
အင်း ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော်မိန့်ခဲ့တဲ့ အချက်လေးချက်က ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ကြောင်း အင်္ဂါလေးချက်ထဲက ပထမအချက်ကို အဓိကပြောတာပါ။ ဒီကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်မထိုက်ကိုလည်း ကျန်တဲ့အင်္ဂါသုံးချက်က သိသာပါတယ်။ ပထမအချက်သာ ယောင်းဝါးဝါးဖြစ်နေမှာဆိုးလို့ ဆရာတော်များ၊ အဋ္ဌကထာဆရာတော်များက ထပ်မံဖွင့်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ငါးပါးသီလကို မြတ်ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့အတိုင်း ပါဠိတော်မှာဖတ်ချင်ရင် ဦးဇင်းရဲ့ ကာမေသုမိစ္ဆစာရကံအကျယ်ဖွင့်ဆိုချက် ကော်မန်းမှာ ပေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ အကျယ်တ၀င့် လေ့လာပါလို့ ပြောပါရစေ။